Ọ bụrụ na ndị otu ọdịnaya gị mere nke a, ị ga - emeri | Martech Zone
Enwere ọtụtụ ederede ebe ahụ na etu esi dị egwu karịa. E nwekwara ọtụtụ nde edemede banyere otu esi ede nnukwu ọdịnaya. Agbanyeghị, ekwenyeghị m ụdị ederede ọ bụla na-enye aka. Ekwenyere m na mgbọrọgwụ nke ọdịnaya dara ogbenye nke na-adịghị arụ bụ naanị otu ihe - nnyocha adịghị mma. Nchọpụta na-adịghị mma nke isiokwu ahụ, ndị na-ege ntị, ihe mgbaru ọsọ, asọmpi, wdg na-ebute ọdịnaya dị egwu nke na-enweghị ihe ndị dị mkpa iji merie.
Ndị na-ere ahịa chọrọ itinyekwu ego na azụmaahịa ọdịnaya, mana ha ka na-agbasi mbọ ike iwepụta ọdịnaya (60%) na nha arụmọrụ (57%). Sujan Patel
Ọbụghị naanị na anyị na-agba mbọ ịmịpụta na tụọ usoro ọdịnaya anyị, anyị na-ewepụta ọdịnaya karịa enwere ike iri. Ezigbo enyi m Mark Schaefer, na-akpọ nke a ujo ọdịnaya.
Amaara m na ị nọ n'okpuru ọtụtụ ihe ndọpụ uche site na ọdịnaya dị ịtụnanya na-esiwanye ike. N'ihi na m nanị ịnọgide na-enwe “mindshare” m na gị taa na a blog, M ga-enwe ike budata mma ọdịnaya, nke n'ezie ga-ewe budata ọzọ oge. Enwere m ike ịkwụ ụgwọ Facebook na ndị ọzọ iji nye gị ohere iji hụ ya n'ihi asọmpi ọdịnaya a maka nlebara anya. Akara Schaefer
Nsogbu a na-aga n'ihu na-emetụta ndị na-ere ahịa n'ime afọ ole na ole gara aga, yabụ mụ na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ dị iche iche na-arụ ọrụ na ịmepụta usoro ọmụmụ ha maka azụmaahịa ọdịnaya. N'ozuzu, M mepụtara anyị njem agile ahịa, na ọzụzụ a gụnyere usoro maka ndị otu anyị iji zụlite ọdịnaya maka ndị ahịa anyị na akụrụngwa nke anyị.
Ọ dịghị mfe ma chọọ mgbalị, mana nke a bụ ndepụta iji hụ na ndị otu gị ga-ewepụta ọdịnaya kacha mma enwere ike:
Mmeri ndenye ọdịnaya
Goals - Kedu ihe ị na-achọ iji ọdịnaya gị nweta? A na-ebipụta ya iji wulite mmata, itinye aka, ikike, ịchụgharị mgbanwe, melite njigide, bulie ndị ahịa, ma ọ bụ melite ahụmịhe ndị ahịa n'ozuzu? Kedu ka ị ga-esi tụọ ma ọ rụpụtara ma ọ bụ na ọ rụghị ọrụ?
Ndị na-ege ntị - Whonye ka ị na-edegara ma ebee ka ha nọ? Ọ bụghị naanị na ị ga - akọwa otu ị si emepe ọdịnaya gị, ọ ga - edugakwa gị ibipụta ma kwalite ọdịnaya gị na nyiwe dị iche iche ma ọ bụ na usoro dị iche iche.
Market - Kedu ka ọdịnaya gị ga - esi mee akara na ụlọ ọrụ gị? Kedu ihe ọ chọrọ iji mee ka uche na njikọ aka?
Research - Onu ogugu enwere onu ogugu n’ahia nke kwadoro ọdịnaya gi? Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-adịkarị njikere ma dị mfe ịchọta. Iji Google, dịka ọmụmaatụ, anyị lere anya na ọnụọgụ ahịa ọdịnaya iji chọta nkọwa Sujan n'elu.
mpi - Kedu ọdịnaya nke asọmpi gị mepụtara na isiokwu ahụ? Kedụ ka ị ga - esi karịa ọdịnaya ha? Anyị na-eme SWOT dị mfe (Ike, adịghị ike, ohere, iyi egwu) nke onye ahịa anyị na isiokwu iji tinye ndị iche iche na-ebute ihe mgbaru ọsọ ha n'ezie. Iji Semrush na Buzzsumo, anyị nwere ike nyochaa ogo kachasị mma na ọdịnaya kachasị akọrọ na isiokwu ahụ.
akụ - Apụta oyiyi, eserese, na-akwado screenshots, ọdịyo, video… kedu ihe ndị ọzọ niile akụ ị nwere ike ikpokọta n'ime ọdịnaya gị iji hụ na ọ bụ na-emeri ọdịnaya?
Writing - styledị edemede anyị, ụtọasụsụ, nsụpe, ịkọwapụta nsogbu ahụ, ịkwado ndụmọdụ anyị, ịmepe oku ime ihe… ha niile dị mkpa iji mepụta ọdịnaya kwesịrị ndị na-ege anyị ntị.
Na agbanyeghị ma ọ bụ tweet, edemede, ma ọ bụ akwụkwọ ọcha, anyị na-aga n'ihu na-ahụ ihe ịga nke ọma mgbe anyị mepụtara usoro mgbakọ tupu ịmalite ọdịnaya anyị. N'ọtụtụ ọrụ, anyị na ndị otu dị iche iche si n'akụkụ ụwa niile na-arụ ọrụ iji kpokọta akụ dị mkpa iji mepụta ọdịnaya dị ukwuu. Anyị nwere ndị ọrụ nyocha maka ịkọkọ ọnụ ọgụgụ na ndị na-eme ihe ike, ndị ọrụ maka nyocha, ndị otu ahaziri maka eserese, yana nhọrọ nke ndị edemede ejiri aka họrọ maka ụdị ha na nghọta ha n’isiokwu ndị ahụ.
Ọbụna mgbe anyị bipụtara ọdịnaya ahụ, anyị emebeghị. Anyị na-ekiri otu o si eme na nchọta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dozie aha na nkọwapụta meta maka arụmọrụ ka ukwuu, welie ọdịnaya ochie na eserese na vidiyo, na mgbe ụfọdụ ọbụna na-ebipụtakwa isiokwu ndị ahụ dị ka isiokwu ọhụrụ mgbe ọ nwere ezi uche. Emere mkpebi ọ bụla gbasara ọdịnaya anyị iji hụ na ọ dị na-emeri, ọ bụghị naanị bipụtara.
Tags: ndị na-ege ntịikikeMmataọdịnaya ọdịnayacontent Marketingebumnuche ahia ọdịnayaahụmahụ ahịambanye ntụgharịnjikọ akamma njigidenchọpụta ahịaohereresearchikeswotEgwuupsell ahịaAdịghị ikena-emeri ọdịnayaWriting
Ekwenyere m na ihe ị tụrụ aka. Nnyocha miri emi bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka iwepụta akụkọ dị egwu nke na-agbakwunye ndị mmadụ uru. Usoro skyscraper nke Brain Dean bu ihe atụ. Mepụta isiokwu miri emi lekwasịrị anya na isi ihe akọwapụtara nke niche ga-eweta nsonaazụ ka mma. Ọ na-enye aka na-anọchi anya azụmahịa ahụ dị ka akara a pụrụ ịdabere na ya.